I-Al Vicolo del Gallo, indawo yokuhlala esikhungweni sezomlando. - I-Airbnb
I-Al Vicolo del Gallo, indawo yokuhlala esikhungweni sezomlando.
Varallo, Piemonte, i-Italy
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Lisa
Indawo yokuhlala esesikhungweni esingokomlando sase-Varallo lapho okudlule nokuxuba kwamanje kunikeza khona umuzwa nokokuzithokozisa okunamandla. Kanye nomgwaqo oyinhloko eceleni kwesimo se-Vicolo del Gallo ufika egcekeni eliyimfihlo nelinokuthula elizungezwe izindlu zakudala zekhulu leminyaka leminyaka. Esitezi sokuqala esinendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, ikamelo elinendlu yokugezela. Igqamile, ihlanzekile futhi ithokomele ilungele abantu abashadile nabangashadile. Ngenxa yokungena ngaphandle kwekamelo, ukuphepha nobumfihlo kuqinisekisiwe
Indawo esezingeni eliphezulu esikhungweni somlando yenza le ndawo yokuhlala ihluke ukuze ikwazi ukuhlala edolobhaneni elibukekayo ngaphandle kokusebenzisa izimoto noma izimoto. Izinyathelo ezimbalwa ukusuka e-Antonini Bridge edumile nazo zonke izindawo zokuheha eziyinhloko: ibhishi elinezambulela zasolwandle nezihlalo zedekhi zamahhala, i-Pinacoteca, i-Sacro Monte, i-Santa Maria delle Grazie, izifunda zomlando...
Amakhilomitha angu-10 nje ukusuka emathafeni okushushuluza eqhweni
Indlu isesikhungweni somlando amamitha angu-20 ukusuka ebhulohweni le-Antonini.
Ibanga lokuhamba: ama-bar, izindawo zokudlela, ama-pizzerias, izitolo, ukudla, ama-ice cream parlors, ama-cubacconist, izindawo zokwenza utshwala...
Ibhishi lokubhukuda elingamamitha angu-50
ukusuka I-Sacro Monte ejabulisayo eqhele ngamamitha angu-100
I-Piazza Vittorio amamitha angu-200
I-Pinacoteca amamitha angu-50
Nganoma yimiphi imininingwane, iziphakamiso nezidingo sikhona ukuze sikusize! Uma ufisa singakuphelezela ukuze sithole idolobhana lethu lasendulo, sisikisele amakilabhu, izindawo zokudlela, imikhiqizo evamile... noma uhlakaniphe futhi ungabonakali.
Nganoma yimiphi imininingwane, iziphakamiso nezidingo sikhona ukuze sikusize! Uma ufisa singakuphelezela ukuze sithole idolobhana lethu lasendulo, sisikisele amakilabhu, izindawo z…
Inombolo yepholisi: 00215600008
Hlola ezinye izinketho ezise- Varallo namaphethelo